Tadidio fa ny ririnina dia mahery setra any amin'ny faritra hafa ny kaontinanta. oram-panala, erka kely, sy ny hatsiaka mamirifiry ataovy sarotra sy mampatahotra ny mpamily mba hitety ny lalana. Mandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka na fiara dia midika diany ny hatsiaka sy ny ranomandry lalambe. Ny lalana dia malama, ary ny fiara na fiara fitateram-bahoaka Mety ho solafaka amin'ny fanaraha-maso.
Na inona na inona ny mahonena, frosty Weather, Paris mijanona ho nofy toerana manodidina taona. Tsy misy ilaina ny malahelo avy rehetra izay tsy maintsy atolotra Paris fotsiny noho ny toetr'andro mangatsiaka kokoa. Ity ny antony tokony hamangy Paris amin'ny ririnina ary nahoana fiaran-dalamby mandeha no fomba tsara indrindra mba ahatongavana any:
Raha toa ianao mitady ny fomba tsara indrindra hahazoana any Paris, ianao hitanao fa fiaran-dalamby mandeha dia ny fomba hanaovana izany aina ary conveniently. Raha mipetraka any Eropa ianao na handeha ho any Paris avy amin'ny tanàna eoropeanina, maro fiarandalamby haingam-pandeha hiditra sy avy any Paris isan'andro. Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ny fomba haingana ianao dia afaka tonga tao Paris avy any Eoropa sasany ny tanàn-dehibe rehefa misafidy iray amin'ireo maro fiarandalamby haingam-pandeha misy:
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-winter-paris%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)